musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » USA Kuputsa Nhau » US - Canada muganho kuvhurazve a no-go
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kanada Breaking News • Hurumende Nhau • Hospitality Industry • nhau • ushanyi • Tourism Kutaura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
US Canada muganho
Iko hakuna chibvumirano pakati peUnited States neCanada pakuvhurazve muganho.
Zviripo zvemuganho zviripo pakati peUS neCanada zvakagadzirirwa kupera musi waChikumi 21, 2021.
Vatungamiriri venyika vese vakabvumirana kuti nguva haisati yakwana kuvhurwa nazvino.
Izvo zviripo muganho zvirambidzo zvicharamba zvichishanda kwemumwezve mwedzi.
Nhasi, Mutungamiri weUS, Joe Biden uye Mutungamiriri weCanada, Justin Trudeau vakurukura kana paine danho rinotevera maererano nekuvhurazve muganho. Zvisinei, hakuzovi nekukurumidza kuita mune izvo.
Mazuva mashoma apfuura, Dhipatimendi reHurumende reUnited States rakapa mukana wakasununguka pakufamba kuenda kuCanada, zvichideredza nyika pazano rayo rezano rekufamba kubva padanho rechina - Usafambe kuenda padanho rechitatu - Fungazve Kufamba. Nekudaro, PM Trudeau akambotaura kuti nyika haifunge kurerutsa zvirambidzo kune vafambi kusvika makumi manomwe nenomwe muzana yevagari vabaiwa jekiseni.
Kurambidzwa kwekufamba kusingakoshe pamiganhu yenyika nekuda kwe COVID-19 kwakatanga munaKurume 2020 uye yakaongororwa nekuvandudzwa mwedzi wega wega kubvira ipapo. Kurambidzwa pari zvino kwemuganhu kunoramba kuripo kusvika Chikunguru 21. Kurambidzwa uku hakushande pakufamba kwakakosha.
Mutungamiriri weCanada Trudeau anga achizeza kuvhurazve muganho kusvika zvino achizivisa kuti kutanga kwaChikunguru zvaizorerutsa zvivhariso zvevanhu vekuCanada vodzokera kumba nevamwe vane nguva refu vaine kodzero yekuenda kuCanada. Izvi hazvitapure vagari vemuUS kuyambuka kuCanada munzira ipi neipi. Asi kusvika kumaAmerican vachiyambuka muganhu, PM kusvika zvino ati hapana dhiri.